I-CBS iphehlelela uPhando emva koTshintsho oluShushu kwiNtetho - Inkcubeko Yopopu
I-CBS iphehlelela uPhando emva koTshintshiselwano oluShushu phakathi kwabaThethi uSharon Osbourne kunye noSheryl Underwood
Izinto ziya ziqina kwi-CBS s Intetho.
IMagazini yabantu uxele ngolwe-Sihlanu ukuba uthungelwano luphehlelele uphando lwangaphakathi malunga notshintshiselwano olushushu phakathi kukaSharon Osbourne noSheryl Underwood.
Kwisiqendu sangoLwesithathu, u-Osbourne owazalelwa eBritane uvakalise inkxaso yakhe kwiBritane, uPiers Morgan, phakathi kokugxeka kwakhe uMeghan Markle kunye nodliwanondlebe neNkosana uHarry kunye nodliwanondlebe no-Oprah. UMarkle ubanga ukuba ujongene nocalucalulo ezandleni zoSapho lwasebukhosini, olukhokelele kwimicimbi yezempilo yengqondo. UMorgan ubuze ukunyaniseka kwamabango akhe, ukudala ukutshatyalaliswa kwempendulo.
Ngaba ndiyithandile yonke into ayithethileyo? Ngaba ndivumile kule nto ayithethileyo? Hayi, u-Osbourne uxelele Intetho . Ayililo uluvo lwam… ndiyamxhasa ngenkululeko yakhe yokuthetha, kwaye hes umhlobo wam.
U-Underwood wachaza ukuba amazwi kaMorgans ayenamagama aphantsi kobuhlanga, kwaye u-Osbourne wamnika ipasi lokuziphatha ngokumxhasa.
Ungathini kubantu abanokuziva ukuba ngelixa umi ecaleni komhlobo wakho, kubonakala ngathi unike ubungqina okanye indawo ekhuselekileyo kwinto ayithethileyo enobuhlanga, nokuba awuvumi? U-Underwood uthe, eyenze ukuba u-Osbournes aphendule ngomlilo.
Ngaba le nduli uSharon Osborne ufuna ukufa kuyo? Kutheni le nto abafazi abamnyama kufuneka bakufundise ngento oyikhusela ngokungazi? Ukuba akazi ukuba uPiers Morgan uthini, kutheni usenza nzima ukuyikhusela? Ungabhala ngokulula inkxaso yakho & amp; STFU pic.twitter.com/7AfYOdmL8I
-KulungileTheTruthIs (@truth_well) Ngomhla wamashumi amabini ku-Matshi 2021
USharon Osbourne ngumzekelo ogqibeleleyo wokuba kutheni kulilize ukuphuma kwindlela yakho UKUNGABI mntu wobuhlanga. Awunakho ukuqiqa nabo okanye ukubafundisa. Yitsho nje nge-chest, mabahlale naloo nto kwaye baqhubeke malunga neshishini lakho. #thetalk pic.twitter.com/oSnwXm19JF
-I-BlackWomenViews Media (@blackwomenviews) Ngomhla wamashumi amabini ku-Matshi 2021
Ndiza kuphinda ndikubuze kwakhona uSheryl, bendikubuza ngexesha lekhefu kwaye ndikubuza kwakhona, kwaye ungazami ukulila kuba kukho umntu ekufuneka elile kufanele ukuba ibindim. Ndixelele xa umvile xa ethetha izinto zobuhlanga, utshilo u-Osbourne.
Lo mzuzu uxakekileyo ushukumise i-CBS ukuba isungule uphando lwangaphakathi kwimisebenzi yokubonisa.
Sizibophelele kwiindawo ezahlukeneyo zomsebenzi, ezibandakanyayo nezihloniphekileyo, utshilo uthungelwano kwingxelo. Yonke imicimbi inxulumene nesiqendu sangoLwesithathu sika Intetho ziphantsi kovavanyo lwangaphakathi.
Nangona i-CBS ithatha imicimbi ezandleni zayo, u-Underwood wayenza yacaca ngexesha leengxoxo zabo ukuba u-Osbourne ngumhlobo wakhe kwaye akamthathi njengohlanga.
Ukungafuni ukujongana nayo kuba ungumfazi oMnyama, kwaye ukuzama ukuyigxotha okanye ukuyenza ibonakale ingaphantsi kunoko ikhoyo, yiyo loo nto yenza ubuhlanga, u-Underwood uqhubeke. Kodwa ngoku, ndithetha nomfazi endikholelwa ukuba ngumhlobo wam kwaye andifuni mntu apha ukuba abukele oku kwaye acinge ukuba siyakuhlasela ngenxa yobuhlanga.
kuqhubeka ntoni no-lil wayne
Ngaphandle kuka-Underwood exhasa incoko yababini, ababukeli abaninzi bacinga ukuba isimilo sika-Osbournes sibonisa ubuntu bakhe. Oku kubandakanya ngaphambili Intetho Umbambisene naye uHolly Robinson Peete, owathi u-Osbourne wamxelela ukuba wayelighetto kakhulu kumabonakude wasemini.
Ndimdala ngokwaneleyo ukuba ndingakhumbula xa uSharon ekhalaza ukuba ndandingu-ghetto kakhulu #Ntetho ... ndiye ndahamba
Ndizisa le nto ngoku bc bendifile ukubukela ukungathobeli ithoni ayithathileyo / umlingani wakhe owayehleli ezolile & amp; ngentlonipho kuba ... KWAKUFUNEKA 🤦‍♀️ #fbf https://t.co/7pnCnhM5rf pic.twitter.com/CXR4DzvlEZ
-UHolly Robinson Peete🥰 (@hollyrpeete) Ngomhla wamashumi amabini anesibini ku-Matshi 2021
indlela yokubumba irayisi ephatha kakubi
Uyenza njani ikeyiki engeyiyo ngestyrofoam
Uthini umahluko phakathi kweekhekhe kunye neemuffins